Anbotek Automotive Qalabka Cusub & Qeybaha Shaybaarka waa sheybaar dhinac saddexaad ah oo ku takhasusay baaritaanka alaabada baabuurta la xiriirta. Waxaan haynaa qalab tijaabo ah oo dhammeystiran, horumarin farsamo oo khibrad leh iyo kooxaha tijaabada, waxaana naga go'an inaan ka caawinno dhammaan shirkadaha ka shaqeeya warshadaha baabuurta hagaajinta waxqabadka iyo yareynta halista, laga soo bilaabo horumarinta wax soo saarka, soo saarista, u rarida adeegga iibka kadib, dhammaan dhinacyada warshadaha baabuurta. Silsilad. Bixi kormeer tayo leh iyadoo la siinayo xalka arrimo kala duwan oo la yaqaan iyo kuwa qarsoon.
Qalabka sheybaarka, shaybaarka iftiinka, shaybaarka makaanikada, shaybaarka gubashada, shaybaarka adkeysiga, qolka baaritaanka urta, shaybaarka VOC, shaybaarka atomization.
• Qalabka gawaarida: balaastikada, cinjirka, rinjiga, cajaladaha, xumbo, dhar, maqaar, qalabka birta, dahaadhka.
• Qaybaha gudaha gawaarida: qalabka qalabka, konsole dhexe, gogo 'albaabka, rooga, saqafka, hawo qaboojiye, sanduuqa keydinta, maareynta albaabka, tiirarka gooldhalinta, isteerinka, qorrax baxa, kursiga.
• Qaybaha dibedda ee baabuurta: bambooleyda hore iyo gadaal, xarkaha hawo qaadashada, dhinacyada dhinacyada, toosnaanta, muraayadaha indhaha, xirmooyinka xargaha, baalayaasha dabada, kharibayaasha, masaxayaasha, wiishka, guryaha laambadda, laambadaha.
• Qalabka elektarooniga ah: nalalka, matoorrada, qaboojiyeyaasha, wiifarada, furayaasha, mitirrada, duubiyaasha baabuurta, noocyo elektaroonig ah oo kala duwan, dareemayaal, kuleylka kuleylka, fiilooyinka fiilooyinka.
• Tijaabada waxqabadka maadada (adag Rockwell adayga, adkaanshaha xeebta, khilaafaadka cajaladda, xirashada toosan, xiraha giraangirta, nolosha badhanka, cajaladda bilowga ah ee cajaladda, cajaladda haysa, saamaynta filimka rinjiga, tijaabada dhalaalka, dabacsanaanta filimka, tijaabada 100 ee shabakadda, gogol dhig, qalin adkaanta, dhumucda dahaadhka, caabbinta dusha sare, caabbinta mugga, iska caabbinta kuleylka, adkeysiga danab), Tijaabada iftiinka (xenon lamp, UV).
• Qalabka farsamada: culeyska cadaadiska, kala-goynta culeyska, kala-goynta culeyska, is-beddelka isbeddelka, xoogga dabacsanaanta, xoog u taageerida saameynta dogobka, awoodda saameynta cantilever, xoogga diirka, xoogga jeexitaanka, xoogga diirka cajaladda.
• Tijaabada waxqabadka kuleylka (tusmada dhalaalida, kuleylka culeyska kuleylka, Heerkulka jilicsan ee Vicat).
• Imtixaanka waxqabadka gubashada (gubashada gudaha gawaarida, gubashada toosan ee tooska ah, raadinta baxsiga korantada, baaritaanka cadaadiska kubbadda).
• Qaybaha gawaarida daal iyo tijaabada nolosha (baaritaanka daalka isku dhafka ah ee jilaaga, baaritaanka adkeysiga gudaha ee gawaarida, iskudhafka isku dhafka gawaarida gudaha, baaritaanka adkeysiga bareega gawaarida, tijaabada nolosha badhanka, tijaabada adkeysiga sanduuqa).
• Tijaabada urta (xoojinta urta, raaxada urta, waxyaabaha urta leh).
• Tijaabada VOC (aldehydes iyo ketones: formaldehyde, acetaldehyde, acrolein, iwm.; Taxanaha benzene: benzene, toluene, ethylbenzene, xylene, styrene, iwm).
• Tijaabada atom (gravimetric method, gloss method, haze method).